Xulka England Oo Isreebreebka Lagu Garaacay 10 Sannadood Ka Dib, Ronaldo Iyo Giroud Oo Guulo Ku Hogaamiyay Portugal Iyo France | Tvsomalilandeurope });
England ayaa hogaanka qabatay markii uu rigoore u saxiixay Harry Kane oo dhaliyay goolkiisii 27aad ee Three Lions markii Raheem Sterling qalad lagu galay daqiiqadii shanaad. Si kastaba, Czech Republic ayaa ciyaarta barbareysay afarta daqiiqo ka dib iyadoo Jakub Brabec uu ku ciqaabay difaacasho xumo. Xiddiga bedelka ku soo galay Zdenek Ondrasek ayaa goolka guusha u dhaliyay Czech ciyaarta oo shan daqiiqo ay ka harsan tahay. Waxa ay aheyd markii ugu horeysay ee ay kulan isreebreebka ah laga badiyo England muddo 44 kulan ah, waxaana Czech ay haatan 12 dhibcood wadaagaan xulka England inkastoo ay hal kulan sii hor ciyaareen. England ayaa u safri doonta Bulgaria Isniinta, waxaana ay u soo bixi doonaan Euro 2020 haddii ay guul ku gaaraan magaalada Sofia oo aysan kooxda kaalinta seddexaad ee Kosovo ka badinin Montenegro.
Dhanka Olivier Giroud iyo Cristiano Ronaldo ayaa shabaqa soo taabtay iyadoo xulalka France iyo Portugal ay guul gaareen kulamadii isreebreebka Euro 2020. Giroud ayaa dhaliyay goolka kaliya ee wadankiisa oo ahaa rigoore iyadoo France ay 1-0 kaga badisay xulka Iceland. Weeraryahanka Chelsea ayaa rigoorada saxiixay daqiiqadii 66aad ee kulankii Group H ee ka dhacay magaalada Reykjavik ka dib markii Ari Skulason uu qalad ku galay Griezmann. France oo dhaawacyo ay hareeyeen ayaa waxa ay ka danbeysa xulka Turkiga inkastoo ay 18 dhibcood wadaagaan iyadoo Turkey ay 1-0 kaga soo badisay Albania. Turkey ayaa hogaanka uga heysa France inay 2-0 uga soo badiyeen kulankoodii bishii Juun iyadoo labada xul ay mar kale kulmi doonaan habeenka Isniinta.
Xulka heysta koobka Nations League ee Portugal ayaa si fudud waxa ay 3-0 ugu garaaceen Luxembourg ciyaartii ka dhacday Lisbon iyagoo seegay fursado badan oo natiijada intaan ka sii badin lahaa. Goolhaye Moris ayaa badbaadin badan sameeyay ka hor inta uusan Bernando Silva shabaqa soo taabanin daqiiqadii 60aad iyadoo Ronaldo uu kubad aad u macaan dhameystiray isagoo dhaliyay goolkiisii 94aad ee xulka Portugal iyo goolkiisii 699 ee guud ahaan kulamada oo dhan halka Goncalo Guedes uu saxiixay goolka seddexaad daqiiqadii 89aad.
Ukraine ayaa iyagana ka badiyay Lithuania kulankii Group B iyadoo Ruslan Malinovskiy uu labada gool ay ku badiyeen u saxiixay. Ukraine ayaa hogaamineysa group-ka iyagoo shan dhibcood ka sareeya Portugal oo kulan ay u harsan tahay. Ukraine waxay u soo bixi doonaan Euro 2020 haddii ay guuldarro ka fogaadaan kulanka ay la ciyaarayaan Portugal Isniinta.